2 Mfe Ụzọ Hichapụ oyiri Photos on iPad mgbe upgrading ka iOS 7
> Resource> iPad> Kachapụ oyiri Photos on iPad na iOS 9/8/7
Ihichapụ foto site na iPad bụ nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-amaghị nri usoro-arụzu ọrụ ngwa ngwa. Ọkachamara foto na-ewere ọtụtụ photos ghota ihe kasị mma ogbugba na-na mkpa nke ihichapụ ókè n'anya nwere ike isi n'ụzọ dị ukwuu na-erite uru na iji mfe usoro. A abụọ mfe ụzọ na i nwere ike ide ka ihichapụ oyiri foto na iPad.
Ngwọta 1: Hichapụ oyiri Photos on iPad Iji aka
Ngwọta 2: Hichapụ oyiri Photos on iPad na batches na Wondershare TunesGo (Mac)
Olee otú m ihichapụ oyiri photos na m iPad na iOS 9/8/7?
Hichapụ a Single Photo si iPad
Gaa Photo App site eji ekpe gaa n'aka nri na ihuenyo site ma ọ bụ ọbụna na-eji ya n'ime igwefoto site na ịme ọpịpị na akara ngosi enịm ọzọ nhọrọ bọtịnụ.
Ugbu a, họrọ foto taabụ. Nke a ga-eme ka gị niile foto. Ka ihichapụ ọ bụla otu foto ịhọrọ album taabụ. Ugbu a enweta na foto ị chọrọ ka ihichapụ. Foto nwere ike anya na ihuenyo zuru mode ugbu a. Na elu n'aka nri nke ihuenyo na aha mmanya họrọ trashcan button ka ihichapụ foto. Ọ bụrụ na ndị trashcan button bụ adịghị enweta na n'etiti ihuenyo na-aha mmanya egosi.
Hichapụ Multiple Photos si iPad
Na mbụ ẹkedori Photo ngwa wee họrọ set nke foto na ị chọrọ ka ihichapụ. Iji họrọ foto site na foto album gaa Photo taabụ ugbu na n'elu nke iPad ihuenyo. Ugbu a enweta na na òkè button nke ga-eme ka i nwee họrọ foto na ị chọrọ ka ihichapụ. Ugbu a na-amalite tapping na photos iji họrọ ha maka nhichapụ. Mgbe ị na-enweta na photos a-acha anụnụ anụnụ gburugburu na ego akara ga-egosi na foto.
Ozugbo ị na-eme na-ahọpụta ndị photos enweta na Nhichapụ bọtịnụ na-acha uhie uhie na elu nke ihuenyo. A ozi ga-egosi na ihuenyo arịọ ma ọ bụrụ na ị bụ n'aka ị chọrọ ka ihichapụ họrọ photos. The nkwenye edinam ga ihichapụ oyiri photos iPad.
Na-agbali ka ihichapụ multiple photos kama ihichapụ otu foto na oge nke bụ na-ewe oge.
Olee ka ihichapụ oyiri foto na ipad 2 iji Wondershare TunesGo (Mac)?
The Wondershare TunesGo (Mac) na-enye ohere ọrụ ka ihichapụ multiple photos na oge si igwefoto mpịakọta, albums na foto n'ọbá akwụkwọ. Download ikpe mbipute nke Wondershare TunesGo (Mac).
Amalite usoro site na nbudata na Wondershare TunesGo (Mac) na wụnye ya na gị Mac kọmputa ngwaọrụ. Wondershare Bụ dakọtara na ngwaọrụ dị ka MacBook Pro, MacBook Air, Mac OS X, 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10 na 10,11.
Iji eriri USB njikọ, jikọọ gị iPad na kọmputa ngwaọrụ na ẹkedori Wondershare TunesGo (Mac). Nke a ga-egosipụta mkpanaka gị na ngwaọrụ na kọmputa na ihuenyo. Na n'aka-ekpe nke window ị nwere ike ịlele edemede ebe i nwere ike pịa na Photos taabụ na-emeghe foto album. Ugbu a, ị nwere ike họrọ ebe (igwefoto mpịakọta, albums na foto n'ọbá akwụkwọ) si ebe ị chọrọ ka ihichapụ photos. Right pịa na photos iji họrọ ha na mgbe ahụ na dobe ala menu click on Nhichapụ nhọrọ ka ihichapụ photos. Ọ bụrụ na ị na-achọ nanị efu foto gị ọbá akwụkwọ mgbe ahụ ị nwekwara ike iji Họrọ niile na ihichapụ nhọrọ ka ihichapụ foto niile na oge.
Olee otú iyi Music ka iPad
Olee otú undelete Video on iPad
Olee otú Hichapụ Photos / ihe Album si iPad / iPad Obere